Wadahadal si’aysan | Heeshi
Sabti, Febraayo 16, 2013 ·	by Idiris M. Cali ·	in Maqaallo	· Faallo u dhaaf
Magiciisa oo dheer, oo ay ku jiraan codad dadka uu soo dhex degay aysan ku dhawaaqi karin, ayuu ku soo gaabshey “Mike.” Mongooliyaan weeye, waana Muslin bilo uun ka hor dib u dhashay. Intaas ba markaan muddo ka hor is barannay ayaan ogaaday. Is-araggeennu waa dhif, maalin dhaweyd se kulannay. Kob makhaayad ah, kursi ka qabsannay. Ka warranka jawiga qabow iyo baraf dhulka qariyey, waxaa xigay iswaraysi. Ereyo waaweyn, isweydaarsannay. Ee ma diin baa, ma af baa?
Dabuubta wadahalkeenna labadaas ayaa wada cammiray. Wuxuu mar uun yiri, “Waxaan ku tala jiraa barashada af-Carabiga.” Niyaddaan uga sacbiyey. “Oo waxaan rabaa in aan Qur’aanka akhristo.” Waxa uu yahay qorshihiisa uu ku dhabeenayo yoolkiisan ayaan weydiiyay. Wuxuu ku warceshay, “Marka hore, waa ii galshada meesha aan casharro af-Carabi ah ka raadsanayo; aniga ayaa is baraya afkan quruxda badan.”
U heellanaantiisa inuu badsado sahayda diintiisa ayaan u riyaaqay. In aan garab u ahay ayaan dareensiiyey, oo aan ku taakulayn doono aqoontayda inta ay igaga sinto af-Carabiga. Balse dareenku diin buu ii jiiday. Waxaan dareemay jacaylka uu u qabo diintiisa. Waxaanan weydiiyey sida uu Muslin ku noqday. Waxa uuna igu yiri, “Jaallahay, waa yarka aad taqaanno ee reer Maleesiyee, ayaa diintan ii soo bandhigay. Waa diin damiirka dadnimada soofe u ah, oo dulliga fuula damiirkaas la dagaallanta.”
Waxaan weydiiyey wixii uu ahaa markii hore iyo sababta uu uga tegay. Ii sheegyey inuu Buudi ahaa, ugana tegay wuxuu ku micneeyay, “Xaalufin is-daba-joog ah.” Wuxuu yiri, “Bilaash kuma caabbudeyn waxaan caabbudayey; goobta caabbudaadda lacag li’i kuma gelayn.” In taasu halis u leedahay iimaanka caabudaha saboolka ah ayaan la soo hadal-qaaday. “Waa run,” intuu ku soo xiray, buu hadalka dacal kale u faruuray.
Wuxuu ku dheeraaday ka warranka sida bulshadiisu u dhaqan-doorsoontay. Wuxuu ka warramay in xumuhu caadoobeen, tusaale ahaan, galmo guur ka horraysa, oon godob loo ba arkaynin! Isagoo sii jarjaraya bulshadiisa “Galbeedowday,” ayaan dhan kale u hoggaanshay; waxaan weydiiyey tiradooda. Wuxuu igu yiri, “Waa saddex milyan.” Waan u qaadan waayey. Ma dad leh magicii waayo-waayo dunida ugu weynaa ayaa intaasi ka hadhay? Waa waxay u muuqan waayeen baan is iri, isagana maqashiiyey mar dambe.
Aragtidaas se wuu igu diiday. Wuxuu ii caddeeyay in aysan dad-yaraantoodu u keenin muuq-li’idooda. Horta, dal ahaan in ay dunida si weyn uga muuqdaan buu ku nuuxnuuxsaday. “Waa siyaasad-xumo na haysata,” ayuu ku waayafuray muuq-li’ida. “Dunida cadkii aannu ku lahayn bay madaxdayadu muujin karin. Waxay ba intaas bixiyaan dhulkeenna qaybihiisa ugu waxsoosaarka badan, oo ka iibiyaan shirkado shisheeye.”
Waxbarashada ayaan ka warraystay. “Kala roon mid bilaash lagu dhigto, oo dadweyne u siman yahay, iyo mid qofkii lacag lihi hawaysto,” buu yiri. “Waxaa dabcan roon, oo maammuus badan leh, waxbarashada lacageed, taas oo ka tayo badan midda bilaashka ah.” Wuxuu aad u dhalliilay in aan afkiisa wax lagu soo barin. “Wuu ba iga lumi rabaa, oo af-Ingiriiska ayaan kaga qor-qoranahay adeegsigiisa,” buu ku soo jaray hadal.
“Layaab ma lihid,” baan ku iri. “Horta afkaaga wax ma ku qori kartaa?” baan weydiiyey. Madaxa ayuu hoos iyo kor u ruxay. “Marka, adiga ayaa isku haya inaad afkaaga xejisato iyo in kale. Anigaygan kuu warramaya lix sano ka hor taas aad ka cabsanayso baa i soo martay. Markii aan dalkan imid in aan afkayga waayayo baan iska dareemay. Waxaanan ku cayntay wax-qorista.”
“Waxaan jeclaa, oo aan jeclahay, gabayada–ka faalloontooda iyo soo bandhigistooda ayaanan wax-qoristayda is-dirneed ka bilaabay. Galshada ayaan kob ka samaystay, halkaas ayaanan ka bilaabay isku ilaalinta afkayga. Marka adiguna sidaas oo kale samee. Amma buug samayso aad baalashiisa ka buuxiso kol ba arrintii culus amma fudud ee ku soo marta, adiga oo afkaaga adeegsanaya.”
“Taas adoo ku guda-jira, dabcan, waxaa lagama maarmaan ah barashada hannaanka ay waxqoristu leedahay, si aad ugu dambaynta wax cuddoon u qortid. Waa inaad tahay akhriste firfircoon, oo u fiirfiirsada weedhaha uu akhriyo, si aad qaabab badan oo wax loo qoro uga qaadatid maqaallada amma buugaagta aad akhrinayso. Ugu dambaynta, uma baahan doontid ka eegasho qof kale, oo adiga ayaa noqon doona mid laga eegto.”
Aniga iyo Mike in door ah baan sii fadhinnay halkii. Waan ku faraxsanaa in aan wax badan ka barto Mike.
* Wadahadalkani waxa uu ku qabsoomay af-Ingiriis, waa kow. Laba, habka uu u dhiganyahay uma qabsoomin (waana sababta uu u si’aysan yahay), oo waxa uu lahaa hab haasaawe. Saddex, xogtu waa siday ahayd oo laga dhawray xalladayn iyo wax la mid ah.
Tilmaamayaal: Haasaawe, Sheeko Dhab Ah, Wadahadal
← Gabayga ma la baran karaa?
Dhugmo: Dhismaha meeris-gabayga →